xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ဂျပန် ဆူနာမီအတွက် ဒေါ်စုကြည်မှ ကဗျာများ ပေးပို့ကူညီမည်
- ဟေး...........အမေစုက ကဗျာတွေပို့တော့မယ်တဲ့ဟေ့....
- ဒါမှန်တာပေါ့ ဂျပန်ဆိုတာ သူဌေးနိုင်ငံလေ...ပိုက်ဆံမလိုဘူး..
- ကဗျာဆိုတာ စိတ်အစာတစ်မျိုးပဲ...ကောင်းလိုက်တာ...စိတ်ခွန်အားတက်တာပေါ့...
- ကဗျာတွေက ဂျပန်လိုလား ..မြန်မာလိုလားတော့ မသိဘူး..မြန်မာလိုတွေဆိုရင် ဂျပန်လို ပြန်ရမယ်..
- ဘ ဘဦးဝင်းတင်ကတော့ သူကစာတခုခုရေးရင် ရှေ့မှာ ဘာလဲဟဲ့ ..ဘာလဲဟဲ့ ဆိုပြီး ထည့်လေ့ရှိတယ် ခုလည်း ဘာလဲဟဲ့ ဆူနာမီ ဆိုပြီးများ ဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော်..ဟီဟိ...ဖတ်ချင်လိုက်တာ..ဒါကိုဂျပန်လိုဆို何が津波です လို့ များရေးရင်ဖြစ်မလားမသိဘူးနော်....ငါကရောက်ခါစဆိုတော့ မပြန်တတ်ဘူး ပြန်တတ် တဲ့သူတွေ ရှာထားဦးနော်...
- အမေစုတို့ကတော့ဟေ့....လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ..တော်ယုံ တန်ယုံ တွေးမိမှာမဟုတ်ဘူး..ဒီစိတ်ကူးမျိုး......
အစရှိသည်ဖြင့် ..အစရှိသည်ဖြင့် ပြောဆိုကြလေသည်..ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာတာက အကယ်၍ သာပေါ့ဗျာ ..ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ကများ ဂျပန်ဆူနာမီ အတွက် ကဗျာများ ပေးပို့မည်ဆိုပါက ဒီလိုအသံမျိုး ထွက်မည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါသလား..????
အဆိုပါ ဒေါ်စုကြည်အားကြံဖန်ချီးမွမ်းပြီး ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအား ကြံဖန်အပြစ်တင်သည့် အလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရရှာလေသော ကျေးဇူးရှင်တို့၏ အသံကို သင်ကြားလိုပါသလား..??????
ထိုသူတို့၏ အပြောင်းလဲမြန်သောစိတ်ဓါတ်ကို သင်သိလိုပါသလား??????
ဒီပို့စ်လေးကို ယူပြီးသင်၏ လူမှုရေး ကွန်ယက်တစ်ခုတွင် တင်ကြည့်လိုက်ပါ.....
" အကယ်၍သာ..ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ က ဂျပန်ဆူနာမီအတွက် ကဗျာများပေးပို့မည်ဆိုပါလျှင်"